Ọ dịghị ụzọ Home ihihi nwere kasị zuru ezu na-emebi ihe ma
Onweghi uzo obibi nke ulo nwere ihe kachasi ike - BGR
Ihe onyonyo TV kacha dị oke ọnụ na -abata abata na…
Ihe nkiri Netflix na ihe nkiri na -apụta na Ọgọst 2021: ndepụta…
Ihe nkiri Netflix ọhụrụ nke Jean-Claude Van Damme na-amalite n'ikpeazụ ...
Ọ bụ na June 9th, nke pụtara na mbụ na nwunye nke Loki bụ n'ikpeazụ dị iji strimụ na Disney +, ị kwesịrị ile ya anya mgbe ọ bụla ị nwetara ohere. Ihe nkiri TV a na-atụ anya ya na-eburu ebe anyị tụrụ anya ya, ọ bụ ya " ebube mgbaru ọsọ " site ugbu a gaba. Ma ọ na-enyo na nnukwu Ududo-Nwoke: Uzo adighi Iju mmiri ahụ nwere ike ịdaba na webụ, na-enye ndị hụrụ ihe ịtụnanya n'anya kacha nwee nkọwa Spider owo ibé leak na anyị ahụwo ruo ugbu a. Rịba ama, ọ bụrụ na ị kpọrọ ndị nkwusa MCU asị, ị kwesịrị ị na-agba ọsọ maka ugwu ugbu a ma zere kpamkpam ụzọ mgbapụ ọzọ. Nke a bụ ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ị maraworị nnukwu Enweghị ụlọ omimi ma mara ụdị ihe nkiri nke Marvel na Sony kere.
Oge kacha mma	Amazon nwere ezigbo diamond studrings ọla ntị maka n'okpuru $ 60 - na nyocha ndị ahụ kwụsịrị na chaatị ahụ!	Ahịa:59,90 $
Tupu m erute ohuru ohuru, aghaghi m ichetara gi ya Enweghị ụlọ O nwere ike ịbụ na ị ga-abụ nnukwu akụkọ na-enweghị isi, na-ejikọ ọnụ ọ bụghị naanị ọtụtụ ndị ọjọọ na nke anyị mechara hụ na Sony. Spider owo oru ngo, kamakwa ndi ozo Spider-Men ndi ozo nke Sony ihe nkiri gosiputara. Ọzọ, Loki amaliteworị kọwaa iwu nke multivers na usoro iheomume dị nsọ, yabụ ihe nkiri TV ga-abụ ihe a ga-ahụ tupu ị nwee ike inyocha Ududo-Man 3 et Iche 2.
Anyị ahụworị ụfọdụ Ududo-Man 3 Chọpụta n'ihu mmiri, otu n'ime ha na-ese n'elu mmiri ụbọchị ole na ole gara aga. Enweghị ike ikwenye nke a n'oge a, mana ọ bụ nchapu n'aka onye nyocha. izu ole na ole gara aga. Ekwesiri ighota na onye ekpenta a nwere ihe edere gosiputara - ya onwe ya bu onye kpughere ihe nzuzo. Congha na onye agha oyi bịara tupu ihe omume a amalite na Disney +.
Ọhụụ ọhụụ ọhụrụ ahụ sitere n'otu isi iyi MCU na-ehi ụra anyị kpọtụrụ aha na mbụ, 4chan, ebe ihe ọ bụla nwere ike ime. Dị ka gara aga ntapu, e nweghị ụzọ iji gosi na ihe ọ bụla, ma onye a na-azọrọ na nwere kpọmkwem ihe ọmụma nke na ohere ka Enweghị ụlọ ngwugwu. Onye ahụ kwuru na ha hụrụ mkpụmkpụ ihe dị ka awa 3 na nkeji 20 wee gụọ edemede mbụ:
Ndewo onye ọ bụla, agbadoro m ozi banyere atụmatụ Sony na mbụ ma gwa m ka m mebie nkata ahụ. M rụrụ ọrụ na Marvel Studios na obere ọrụ, mana kwagara ịrụ ọrụ na Sony afọ ndị gara aga. Ahụrụ m ụzọ siri ike nke No Way Home nke dị ihe dịka 3 awa na 20 nkeji. Enwere ndị CGI na-emechabeghị, ọtụtụ ihe nkiri na-edochi eserese eserese maka foto ndị ọzọ. Agbanyeghị, agụla m edemede ahụ ọ bụ ezie na ọtụtụ agbanweela kemgbe eserese, enwere m ike ịza ajụjụ ndị ahụ na-eji ya dị ka ntụnye aka maka ihe ndị na-anọghị na ibe a.
Onye ahụ depụtara naanị ihe abụọ mbụ nke ihe nkiri ahụ, na-akọwa etu nsụgharị Spider-Men nke Andrew Garfield na Tobey Maguire si apụta na fim ahụ. Ikwapu yiri ndị gara aga. Ọ na-akọwa etu MCU's Peter Parker (Tom Holland) si emeso ihe ndị a mechara Ọpụpụ n'ụlọ na otu Dọkịta Strange (Benedict Cumberbatch) si agba mgba ugbu a na ọtụtụ ndị na-emetụta ndị ọjọọ site na eziokwu ndị ọzọ. Ndi ojoo a bu ndi ojoo anyi huru na nke Sony Spider owo ahụmahụ, na MCU's Peter Parker na-eche na-enyere ha aka ịgbanahụ ụlọ mkpọrọ Strange na mberede.
Ududo-Man 3 foto: Site n'aka ekpe gaa n'aka nri, Tom Holland, Jacob Batalon na Zendaya. Isi ihe onyonyo: Marvel Studios na Sony
Na ndị na-esonụ m depụtara dum unedited ihihi dị ka agba na 4chan. N’ị kachasị mma, ọ bụ akụkọ ifo na-agụ nke ọma. O di nwute, nke ahu agunyeghi oru ikpeazu, ma emechibidoro onye na-adụ ụzọ tupu ya enwee ohere imelite ya:
> Ihe nkiri ahụ meghere site na nsonaazụ ozugbo nke ihe omume ndị dị anya site na ebe obibi. Peter dị ka Spidey na-agba ọsọ wee hụ na SWAT gbara ya gburugburu na ndị helikopta ndị uwe ojii nọ na Statue of Liberty. Peter gbapụrụ n'iji helikọpta laghachi n'obodo wee zoo n'azụ ụgbọ oloko FEAST, na-ewepụ ihe nkpuchi ya gwụrụ ike ka ọ na-ezu ike na akwa uwe ọ nọ ọdụ.
> Egwuregwu Marvel Studios, nke si na Bugle.NET na JJJ (Far Site Home recap, ụfọdụ ihe nkiri Beck ọhụrụ ebe a dị ka 'nkwụsị', na-ekwu banyere Shield Cape ọhụrụ na Statue nke nnwere onwe dị ka onyinye si Wakanda na ihe ngosi. na-akwado Sam Wilson dị ka Cap), nke na-esote ihe nkiri si na Peter n'ụlọ ikpe. Onye na-agbachitere ya Matt Murdock, nke Charlie Cox na-egwuri egwu, onye na-anwa ime ka ndị juri na Peter Parker abụghị Spider-Man. O yiri ka ha anaghị anwa igosi Spider-Man ọcha, naanị Peter. A kwadoro ụlọ ikpe ahụ maka ụbọchị ahụ ma Pita na Matt, May na Obi ụtọ na-ekwu okwu. Ka ha na-apụ n'èzí, anyị na-ahụ ndị nkwado Mysterio dị iche iche na-eme ngagharị na mpụga ụlọ ikpe na ndị kwenyere na Peter bụ onye e mere ntọala. Peter na-ezute Ned na MJ n’ebe a na-eme bred ebe ha na-arụ ọrụ. Ha na-atụle njirimara na-ekpughe ma gosi Peter a Midtown High News vidiyo nke emere na isiokwu ahụ (Flash gosipụtara na-agọnahụ na "Penis Parker nwere ike ịdị jụụ dị ka Ududo-Nwoke" tupu ịmalite ịkwa ákwá ma gwa ha ka ha kwụsị ịse ya).
> Peter nwere nro banyere Beck na-akwọ ya ka o merie na otu ọ ga-esi bibie ihe niile Peter nwere. Gyllenhaal laghachiri maka ihe nkiri a. Pita tetere ụra wee gaa n'ụlọ Nedị maka otu mgbede. Ned nne kwere ka ọ bata na Peter na-agwa Ned banyere nchegbu ya banyere otu nke a si emetụta ọbụbụenyi ha na mmekọrịta ya na MJ, mana Ned kwere Peter nkwa na ha abụọ na-akwado ya.
> N’echi ya, Peter rutere n’ụlọ ikpe ahụ ya na Matt, Happy and May, zutere Ned na MJ n’ọnụ ụzọ. Ndi otu Mysterio Supporters meriri ha na mberede. Peter na-anwa ime ka onye obula si ebe ahu ghara iji ike ya, ma o na-agbasi mgba ike rue mgbe eburu ya na Sanctum Santorum ya na Ned, MJ, Obi uto, na May.
> Iche na-egosi n'ụdị astral ya ma gwa Peter na ọ na-eche ọtụtụ ihe iyi egwu ihu, na-ewepụ ndị mmadụ na ụwa ha. Ọ na-ekwu na ọ kpọtara Peter na ndị enyi ya na Sanctum iji chọọ ebe mgbanahụ "oke egwu" nke ụwa ndị a. Mgbe Strange na-apụ, Peter, Ned, na MJ na-enyocha Sanctum wee gafee ọnụ ụzọ nke na-eduga n'ọtụtụ nrigbu nke Strange na-echekwa ọtụtụ stowaways (CGI adịghị agwụ agwụ ebe a, mana nkọwa edemede "ọtụtụ ihe ịtụnanya multivers" bụ n'etiti ndị gosipụtara), gụnyere Molina dị ka Octavius ​​na Foxx dị ka Electro. Ned soro ha, ha na-akọkwa ọnwụ ha na fim ha dị iche iche wee na-ekwu na ha chọrọ mmalite ọhụụ na MCU. Nke a na-emetụta Peter, onye kpebiri n'echeghị echiche ịhapụ ha. Ock na-awakpo ya mgbe ahụ, mgbe Dr. Strange gosipụtara iji chebe Peter. Electro ọgụ Strange onye na-egbochi azụ ọkụ na-aga n'ihu ka Otto gbapụrụ. Electro na-ebute àmụmà ahụ n'uko ụlọ ma soro Otto dị ka Strange na-echebe Ned na MJ site na irighiri ihe.
> Peter hapụrụ Santorum yi uwe wee gbalịa ịchụpụ ha, mgbe mwakpo Paul Giamatti rhino, pụtara n'okporo ámá. Ọ na-anwa ịkwatu ya n'usoro nke enwere ike ịkọwa dịka njem mbibi ma ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ebere Rhino ruo mgbe mkpuchi olulu dara ya, na-akụda ya. Andrew Garfield's Spider-Man abanye na ọgụ ahụ na njakịrị na Rhino na Peter tupu ha abụọ ekpebie iji usoro Empire Strikes Back zukọta iji mee ka ọ daa.
> Ọgwụgwụ nke omume 1
> MCU Peter na Andrew's Peter jikọrọ onwe ha ma gosi onwe ha. Ha nwere njikọ ozugbo ma malite ịchọpụta banyere ndị na-agba égbè weebụ ibe ha ma gosipụta ọgba aghara ha banyere ihe mere Andrew ji nọrọ ebe a ruo mgbe Strange kpọghachitere ha na Sanctum wee ziga Rhino n'ụlọ mkpọrọ. Ọ na-akọwa ọtụtụ mmadụ na Peter abụọ ahụ ma kwuo na ọ kpọtara Peter site na Andrew iji nyere MCU Peter aka ịchọta ndị ọjọọ ahụ gbapụrụ agbapụ, ebe Strange na-arụsi ọrụ ike na iyi egwu ka ukwuu ịchụ ha. Ọnọdụ ahụ kwụsịrị na May, Ned, na MJ na-arịgo n'elu Pita abụọ ma gosipụta ọgba aghara ha. Tom's Peter jụrụ ebe ha kwesịrị ịmalite ile anya.
> E gosipụtara Ock na Electro ka ha na-abanye ebe a na-ahapụ Oscorp ma Norman Osborn nke Willem Dafoe nabatara ya. Osborn na-ekwu na ọ bụ otu n'ime ọtụtụ iwe Spider-Man na-ewe maka "igbu" ya. Ọ na-ekwu banyere ọnwụ ya n'aka Spider-Man (2002) ma na-enye ndị na-eme ihe ọjọọ ọ bụghị naanị ụzọ ị ga-esi megwara ha ọnụ, ma nwee ohere ịnọ na MCU ruo mgbe ebighị ebi. N'ebe a, ekpughere ya na "Otto" bụ n'ezie ụlọ ntu ahụ na-achịkwa mmụọ nke Ock mgbe ọ na-achọ ịnwụ. Electro na Ock nakweere atụmatụ Norman ma sonyere ya.
> Ihe abụọ Pita kwuru banyere ndị na-adịgide adịgide banyere mbara igwe ha iji gbalịa chọpụta ebe Electro gara, ma nwee mkparịta ụka nke kwuru Andrew's Gwen Stacy na Uncle Ben, ebe Peter kwuru Tony na Ben ya tupu ha aghaa ngwa ngwa site na isiokwu ahụ. Mgbe Andrew na-ekwu na ọ nweghị Tony Stark na ụwa ya na Oscorp bụ nnukwu ụlọ ọrụ mmepụta ihe nke ụwa ya, MJ na-eweta ịdị adị nke Oscorp na MCU ma gosipụta Peters otu isiokwu na-ekwupụta na Oscorp Industries zụtara Avengers Tower na ọ bụ nke mbụ ụlọ ọrụ na-abụghị Stark iji nweta ike nke Arc Reactor. Mgbe Peter kọwaara Andrew ihe arc chernobyl bụ, ha abụọ chee na Electro na-aga mgbe chernobyl na isi maka ụlọ elu.
> Ha ziri ezi mgbe ha zutere Electro na-anwa ịbanye n'ime ụlọ elu ahụ. Esemokwu dị mkpirikpi na-amalite n'etiti Peters na Electro tupu nkwụsịtụ nke ọnụnọ Rhys Ifans 'Lizard. MCU Peter na-achụ Electro, onye batara na ike ụlọ elu ka ọ chọta Reactor ebe Andrew nwere nzacha na Lizard. MCU Peter chụrụ Electro gbadaa na mmiri ebe Arc Reactor dị, Peter na-ele anya ka ọ na-enweta ume site na Arc Reactor ma na-agbapụ ya site na ebubo mega. A hụrụ Ock ka ọ na-eweghachi ụta ya na ogwe aka ya tupu ya na Electro agbapụ. Andrew na-alụ ọgụ megide Lizard, onye ọ sịrị na ọ "siri ike karịa oge gara aga", mgbe Peter sonyere n'ọgụ ahụ. Na njedebe, Lizard gbapụrụ, ndị Peters na-akwa emo na ha ejighi ọgụ ịlụ ọtụtụ ndị ọjọọ n'otu oge.
> Ock na-eweghachi chernobyl ahụ na ụlọ ọrụ Oscorp, na Electro hụrụ ike ọ na-ewe. Osborn gwara Electro ka o merie ya, nke na -emepụta nkenke nkenke n'eziokwu. Lizard laghachiri ma gwa Osborn na e meriri Peters mana ọ nwụrụ anwụ. Mgbe ọ nụrụ nke a, Osborn gwara Ock na oge eruola ka ha rute azụmaahịa ma ha amalite mezue ngwaọrụ nke Norman mepụtara iji nye ike nke arc iji mepụta ọnya nke ga-enyere ha aka ịgagharị n'ọtụtụ mmadụ.
> Peter na Andrew nọ ọdụ n’elu ụlọ na-ekwu maka ọdịda ha dị ka Spidey. Peter na-ebute ihe ụgbọ mmiri ahụ, ọnwụ Tony na Mysterio na-emeri ịbụ ndị nweere onwe ya na otu ọ si aga n'ihu na-emehie ihe nke furu ya. Andrew na-ekwu maka Captain Stacy, Connors, Harry na Gwen na otu ịbụ Spider-Man si akwụ ụgwọ, mana ha ka ga-eji ikike ha mee ihe ziri ezi. Mkparịta ụka a na-ewe ọkụ karịa ka ndị dike na-ekwurịta otu ha siri jiri ike ha mee ihe kwa ụbọchị (Andrew's Peter kwuru na ntanetị iji zere okporo ụzọ iji rụọ ọrụ).
> Ala ọma jijiji na-akwụsị ihe abụọ ahụ, dịka Osborn na-anwale ngwaọrụ nkewa ọtụtụ. Ọ na-eziga Thomas Hayden Church's Sandman site na nkwekọrịta ahụ, na-ekwu na ọ "na-alọta." Sandman gafere, mana tupu ndị ọzọ abanye na nkụja ahụ, Spideys abụọ ahụ gosipụtara iji kwụsị ha. Ha na Ock na Lizard na-alụ ọgụ ka Electro na-agbasi mbọ ike ịnwe ume nke arc. Akpụkpọ ụkwụ ahụ na-adị cha cha ma na-ebute Spideys abụọ na Lizard. A na-atụba ndị Spide n'okporo ámá ebe Lizard adịghị ahụ ka ọdịda na-emechi. Osborn, Ock na Electro na-ele ọgbaghara ahụ n'akụkụ ha, ụlọ ọrụ ahụ bụ mkpọmkpọ ebe. Osborn na-ekwu na ha chọrọ onye nduzi toro ogologo ka a na-adọta anya ya na akwụkwọ mmado ọhụrụ Statue of Liberty.
> The abụọ Peters abịa na-ele onye ọ bụla ọzọ tupu a wakporo site Sandman, onye bụ n'ụzọ dị ukwuu n'ụdị mmadụ ebe a na-eji ájá ngwá agha. Ha na-agbasi mgba ike ka ha lụso ya ọgụ ka ọ na-ejikwa ọfụma banye n'otu oghere ọ bụla ruo mgbe nnukwu ụgbọ mmiri kwaturu ya. Ọ na-agwakọta n'okporo mmiri n'okporo ámá, ndị Peters na-ekiri ruo mgbe ha lere anya na mmiri ọkụ ọkụ dị nso nke yiri ka ọ gbagọrọ agbagọ na Sandman na ike dị egwu, ha na-abịaru nso na ihe edeturu nke nchọta ejiri ya. Anaghị m echeta ọfụma, mana ọ bụ adres dị na Forest Hills nke akpọrọ “"lọ”.
> Ndị Pita rutere n'ụlọ na Queens na uwe ndị nkịtị. Ha na-atụle ohere onye onye edetu ahụ nwere ike ịbụ, tinyere MCU si ọzọ terrestrial "Agents of SHIELD" Peter, nke Andrew zaghachiri na ụjọ. Ha kụrụ aka n'ọnụ ụzọ nke mepere Kirsten Dunst dị ka ọrụ nke Mary Jane Watson, onye na-akpọ ha ka ha bata. Ọ na-enye ha koko ha n'ime ime ụlọ ebe Raimiverse J. Jonah Jameson na-ekwu okwu na televishọn banyere "Quest Aerospace merges na Stark International". Mary Jane hụrụ na "ọ ga-adaba na nke abụọ". Pita lere Pita anya tupu nwoke abata n'ime ụlọ ahụ wee nọdụ ala n'ihu ha. Peter Parker nke Tobey Maguire dere. O kwuru, sị, “Ya mere, olee ndị bụ ụmụ okorobịa? ".
Ndị na-azụ ahịa Amazon na-eche banyere ihe nkwụnye smart smart TP-Link - nweta ha naanị $ 6,07!	Ndepụta nke ọnụahịa:26,99 $	Ahịa:24,29 $	Ị chekwaa:$ 2,70 (10%)
Edemede a pụtara izizi (n’asụsụ Bekee) na https://bgr.com/entertainment/spider-man-no-way-home-plot-spoilers-detailed-leak-5930785/
md5sum - Lelee iguzosi ike n’ezi ihe nke ihe nbudata - Atụmatụ
Nke a bụ otu ị ga - esi mee kọmputa gị okpukpu abụọ maka $ 50 na Amazon - BGR
Ihe ngosi TV kachasị ọnụ ga -abata na Septemba 2022 •…
Ihe nkiri Netflix na ihe nkiri na -apụ na Ọgọst 2021: ndepụta zuru ezu
Ihe nkiri Netflix ọhụrụ nke Jean-Claude Van Damme na-amalite n'ikuku ...
Nke a bụ ihe nkiri Marvel-DC crossover nke James Gunn chọrọ ime